सकारात्मक सोच – BRTNepal
डा. टीकाराम पोखरेल २०७४ साउन ७ गते ९:०२ मा प्रकाशित
मानिस यस्तो प्राणी हो जसको वास्तविक पहिचान उसको विचारबाट हुन्छ । मानिसको जस्तो सोच्दछ, ऊ त्यस्तै बन्दछ । त्यसैले असल मानिस हुन हरेक व्यक्तिले सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । भनिन्छ– “सकारात्क सोच नै मानिसको जीवनको ऊर्जा हो । बन्दुकको नालमा भन्दा सकारात्मक सोचमा हजारौँ गुना बढी शक्ति हुन्छ ।” हरेक व्यक्तिको यस्ता शक्तियुक्त सकारात्मक सोचलाई सही ठाउँमा, सही समयमा, सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकियो भने जीवन र जगतको स्वरूप नै अकल्पनीय सुन्दर बन्दछ । तर विडम्बना हामी सकारात्मक सोचप्रति दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै गइरहेका छौँ । नकारात्मक सोचले भने हामी निकै भरिपूर्ण छौँ । यही कारण हाम्रो देशले आसातीत प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि हाम्रो देशमा केही पनि भएको छैन ।
जोसँग सकारात्मक सोच छ । ऊ नै सफलताको शिखर चुम्दछ । जोसँग सकारात्मक सोच छैन, ऊ भाग्यलाई दोष दिएर टाउकोमा हात लाएर दिन गुजार्छ । एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढेका सकारात्मक सोच भएका विद्यार्थीहरू भविष्यमा नेतृत्वको चुलीमा पुगेका र नकारात्मक सोच भएकाहरु परिवारको भार बनेका उदाहरण हाम्रै वरिपरि बग्रेल्ती छन् । खेलहरुमा पनि खेलाडीलाई सकारात्मक हौसला दिँदा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम ल्याएका उदाहरण प्रसस्तै छन् । व्यापार व्यवसायमा त झन् सकारात्मक सोचको ज्यादै महत्त्व छ । जति सकारात्मक सोच उति उच्च आर्थिक प्रगति हुन्छ । नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिभन्दा सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू कयौँ गुणा छिटो आफ्नो लक्षित गन्तव्यमा पुग्दछन्
डा. योगी विकाशानन्द भन्छन्– “संसारलाई बदल्नु छ भने सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ ।” हामीमा पछिल्लो समय सबै काम अरूले नै गरिदिनुपर्ने र आलोचना खेती चाहिँ आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी बढ्दो छ । यो बिलकुल गलत हो । अरूले यो गरेन त्यो गरेन भनिरहँदा मैले चाहिँ के गरेँ त भन्ने ठाउँबाट प्रश्न सुरु गर्नुपर्छ । डा. म्याक ओडेलका अनुसार “एउटा महान् कार्यको थालनी गर्ने दिन आजै हो ।” रत्तिभर ढिला नगर्नुस्, अरूको आलोचना गरेर समय बर्बाद गर्ने होइन, आफ्नो काम गरेर समय सदुपयोग गर्नुहोस् । सबैप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनुस् । जीवन र जगतलाई सुन्दर देख्नुस् । सकारात्क सोच घर, संस्था, सङ्गठन कार्यालय, समाज सबैमा प्रयोग गर्नुस् । याद राख्नुहोस् सकारात्मक सोचको सुरुवात आफैँबाट गर्नुहोस्, अहिले नै गर्नुहोस्, अनि मात्र अरूमा पनि सकारात्मक सोच आउने छ ।
नेपाली समाजमा हिजोआज जतासुकै पनि नकारात्मक कुरा मात्र देख्न र सुन्न पाइन्छ । कहीँ कतै समूहमा बसेर छलफल गरिरहेका मानिस हुन् वा दुईजनाबीचको कुराकानीमा होस्, सञ्चार माध्यममा होस् वा अन्य क्षेत्रमा होस्, सबैतिर केवल नकारात्मक कुराकै चर्चा बढी हुने गरेको छ । यस्तो भएन, त्यस्तो भएन भन्ने गुनासा, असन्तुष्टि एवं निराशाले वातावरणलाई दूषित तुल्याएको छ । यसरी वातावरण नै दूषित भएपछि मानिसको मनस्थितिमा समेत स्वाभाविक तवरले नकारात्मक असर पर्छ । समाज नकारात्मक सोचको सिकार बन्दै गइरहेको छ भने त्यो समाजभित्रका पात्र हामी चाहिँ सकारात्मक कसरी हुन सकौँला ? समाज नकारात्मक सोचले अगाडि बढ्दैन भन्ने थाहा छ, तर पनि नकारात्मक विचारको ओइरो छ ।
जो व्यक्ति जीवनप्रति सकारात्मक सोचाई राख्छ, त्यही व्यक्तिले जीवनमा सफलता पाउन सक्छ । नकारात्मक सोचाई र विचारहरूलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्न सके हामीले हाम्रो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन दुवै ठाउँमा सफलता पाउन सक्छौँ । सकारात्मक सोचमा ठुलो शक्ति छ । यसको ठिक विपरीत नकारात्मक सोचले शक्ति क्षय गरिदिन्छ । हाम्रा वरिपरि पनि सकारात्मक आँखाले हेरे धेरै उपलब्धिमूलक उदाहरणहरू छन् । अशक्त झमक घिमिरे सकारात्मक सोचको उपजले साहित्याकाशमा चम्किन् । यदि उनीमा आत्मबल थिएन भने उनी अहिले पनि ओछ्यानमा नै खुम्चिएकी हुन्थिन् । अपांगता भएकाहरु सगरमाथा चढिसकेका छन् । गाउँबाट रित्तो हात हिँडेका सीताराम कट्टेलहरु (धुर्मस सुन्तली) ले भूकम्प प्रभावित र मुसहर बस्तीलाई नयाँ जीवन दिएका छन् ।
राजनीतितर्फ हेर्ने हो भने वि. सं. २००७ सालसम्म एकतन्त्रीय जहाँनीया शासनमा जकडिएको र विश्वले विकासको शिखर चुमिसक्दा बल्ल प्रजातन्त्र आएको नेपाल ७० वर्ष पनि नपुग्दै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । सकारात्मक आँखाले हेर्दा यति छिटो राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि सायदै विश्वमै होला । नेपालको विकासको सुरुवात नै २००७ सालपछिको हो । त्यसबाट यता हेर्दा विकासमा फड्को नै मार्न नसके पनि केही काम अवश्य भएको छ । एमालेको आफ्नो आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ अभियानले गाउँमा विकासको चेतना पु¥याएको छ । माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे द्वन्द्वले धेरै कुरा विनास गरेको हामीले देख्यौँ, लेख्यौँ । तर त्यसले ल्याएको चेतनाको हामीले कहिले हिसाब गरेनौँ कि ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा १० वर्षे द्वन्द्वको बीजारोपणबाट नै भएको कुरा सायद हामीले बिस्र्यौँ । हामी परिवर्तन स्वीकार गर्नै नसक्ने र यथास्थितिमा रुमलिने रोगको सिकार भएका छौँ । सङ्घीयतामाथिको नकारात्मक धारणा पनि यस्तो यथास्थितिवादीताको उपज हो । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको व्यवस्था र त्यसले घरदैलोमा गरेको अधिकारको वितरणको सकारात्मक पाटोको बहस भने अझै हुन सकेको छैन । नराम्रा मात्र कुरा देख्ने सबै नकारात्मक सोचका उपज हुन् ।
सकारात्मक सोचका लागि केही प्रक्रियाहरू सुझाइएका छन् । सर्वप्रथम त म सकारात्मक छु, अथवा आजैबाट म सकारात्मक हुन्छुबाट सुरु गरौँ । हरेक दिन बिहान सकारात्मक सोचाइबाट दिनको सुरुवात गरौँ । अरूलाई कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्ने, दानी बन्ने, श्वास नियन्त्रण गर्ने, सकारात्क कल्पना गर्ने र ध्यान गर्ने जस्ता केही उपायहरू सकारात्मक सोचका आधारभूत तत्वहरु भनिएका छन् । यस्ता कुरा पढ्नेभन्दा अनुसरण गर्ने गरौँ । जहिले पनि आफूले अरूबाट खुसी या केही सामान पायाँैं भने त्यो खुसी वा सामान दिने व्यक्तिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ, यसले मनमा नराम्रो सोचहरु प्रकट हुन दिँदैन । बरु मनमा मायाको भावानाहरु प्रकट हुन दिन्छ । जहिले पनि बिहान उठ्ने बितिकै जीवनमा आफूले पाएको खुशीहरुको लागि संसारप्रति आभारी हुँदै धन्यवाद व्यक्त गर्ने गर्नु उचित हुन्छ । आफू जन्मेको स्थान, समाज देश र बाँचेको धर्ती र वातावरणप्रति सधैँ कृतज्ञ र खुसी हुन सिकौँ ।
हाम्रो स्वाभाव कस्तो रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ भने जहिले पनि हामी अरूको लीनमा खुसी हुन्छौँ । सित्तैँमा पाए अलकत्र खाने, उल्फाको धन फूपूको श्राद्ध जस्ता उखान हाम्रो समाजमा प्रचलित छन् । अरूलाई दिनु परे मन खुम्च्याउँछौँ हामी, तर लिन परे खसी । अरूको लिएर हुने खुसी क्षणिक खुसी मात्र हो । जहिले पनि अरूलाई मद्दत गर्ने भावना मनमा पाल्नु पर्छ । यो नै वास्ताविक र दीर्घकालीन खुसी हो । आफूमा भएको गुण, क्षमता र सीप अरूलाई पनि बाड्नका लागि हो । भण्डारण गर्नका लागि होइन । गुण, क्षमता र सीप भण्डारण गरेर ब्याज प्राप्त पनि हुँदैन । तर ज्ञान र सीप बाँड्दा भने घट्दैन, बरु यो झन् झन् बढ्छ । अरूलाई दिँदा अकल्पनीय खुसी पनि मिल्छ । यो खुसी लिन मानिस कहिले चुक्नु हुँदैन । अरूलाई दिएर प्राप्त गरेको खुसीले नै मानिसलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजान्छ । लिएर पाएको खुसीले कहिल्यै सकारात्मक बनाउँदैन ।